Indalo Nezinganekwane Zendalo (PDF) - AFRIKHEPRI FOUNDATION
Indalo kanye nezinkolelo zokudala (PDF)
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngoJanuwari 10, 2020
Igama lezinganekwane livela ku-Greek muthos okusho ukulandisa; kodwa ayikho indaba. Inganekwane yindzaba enenjongo yokuchaza izimfihlakalo zezwe, umsuka wayo, amanani ayo, incazelo yalo, ukubeka ubuhlobo phakathi kwabantu nabonkulunkulu. Ngisho nalapho indaba ingenakwenzeka, inencazelo ejulile, ilandelela ukumelela komphakathi wayo kanye nendawo yayo yonke indawo. Izinkolelo eziningi zitshela indaba yokudalwa kwendawo nomuntu.
Usuke usabela "Indalo Nezinganekwane Zendalo (PDF)" Imizuzwana embalwa edlule